देशभरिका २ सय बढी प्रतिष्पर्धीहरुलाई उछिन्दै डा. निगाता केसी मिस नेपालको फाइनलमा
काठमाडौ । देशभरिका २ सय बढी प्रतिष्पर्धीहरुलाई उछिनेर डा. निगाता मिस नेपाल २०२० को फाइनलमा पुग्नु भएको छ । नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास, महिला सशक्तिकरणलगायत अन्य जीवन व्यवहार सम्बन्धी सीप र कलाबारे ३ महिने प्रशिक्षण सकाएकी निगाता अन्तिम तयारीका लागि आइतबारदेखि २ हप्तासम्म क्लोज क्याम्पमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
क्लोज क्याम्पमा फाइनल राउण्डमा गरिने प्रस्तुतिकरणबारे प्रशिक्षण हुने निगाताले बताउनुभयो । द हिडन टिजर्सले आयोजना गरेको मिस नेपाल २०२० मंसिर २७ गते फाइनल हुँदैछ । प्रतियोगितामा विभिन्न विधासहित उपाधिका लागि निगाताले कडा मिहेनत गरिरहनु भएको छ ।
घोराही–१५ रतनपुर निवासी बिष्णुबहादुर केसी र ललिता केसीकी कान्छी छोरी डा. निगाता पढाइ लगायत अन्य क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ । कला क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्ने निगाताले चिकित्सा विषयमा एमबिबिएस गर्नुभएको छ ।
वहुप्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्वकी धनी २४ वर्षीया निगाताको उचाइ ५ फिट ५ इन्च छ । भविष्यमा छाला रोग विशेषज्ञ बनेर पीडितहरुको सेवा र उपचारमा संलग्न हुने डा. निगाताको लक्ष छ ।
आफ्नो लक्ष र सपना पूरा गर्न मिस नेपालमा सहभागी भएको बताउने निगाता प्रतियोगितामा विभिन्न बिधासहित उपाधिको लागि अन्तिम प्रतिष्पर्धा गर्दैहुनुहुन्छ । प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी चलिरहँदा आयोजक हिडन टिजर्सले मिस पपुलर च्वाइस अवार्डको लागि मतदान खुल्ला गरेको छ ।
यो अवार्डका लागि निगाताले आफूलाई भोट गर्न सबैलाई अपील गर्नु भएको छ । आइएमइ पे एप डाउनलोड गरी सो मार्फत प्रतिष्पर्धी नं. ७ की निगातालाई भोट गर्न सकिन्छ । मिस नेपाल २०२० को फाइनलमा २१ जना प्रतिष्पर्धीहरु छन ।